Australia, Canada, New Zealand, UK, USA jụọ China: Kwụsị amụma Hong Kong!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Australia, Canada, New Zealand, UK, USA jụọ China: Kwụsị amụma Hong Kong!
Akụkọ na -agbasa Australia • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Hong Kong • Akụkọ ọhụrụ New Zealand • News • Safety • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Hong Kong na-aghọ nchegbu mba ụwa, nke a abụghịkwa ihe gbasara COVID-19. Ederede nke nkwupụta a na-esonụ metụtara ndị Republic of China bụ ndị gọọmentị nke United States of America, Australia, Canada, New Zealand, na United Kingdom wepụtara.
Anyị, ndị ozi mba ofesi nke Australia, Canada, New Zealand, na United Kingdom, na United States Secretary nke State, kwughachiri nchegbu anyị siri ike gbasara itinye iwu ọhụrụ nke China iji gbochie ndị omeiwu ahọpụtara na Hong Kong. Site na ntinye nke Iwu Nchebe Mba na yigharịrị nhoputa ndi omebe iwu nke Septemba, mkpebi a na-emebi oke nnwere onwe na ikike na nnwere onwe Hong Kong.
Omume China bụ mmebi doro anya nke ọrụ mba ụwa n'okpuru iwu kwadoro, Nkwupụta Mmekọrịta Sino-British debara aha UN. Ọ na-emebi nkwa abụọ China na Hong Kong ga-enwe 'nnwere onwe dị elu', yana ikike nnwere onwe ikwu okwu.
Iwu imebi iwu pụtara akụkụ nke mkpọsa akpọkọtara ọnụ iji mechie ọnụ niile dị oke egwu na-esote yigharịrị nhoputa ndi omebe iwu nke Septemba, itinye ebubo megide ọtụtụ ndị omeiwu ahọpụtara, na omume iji mebie nnwere onwe nke mgbasa ozi mgbasa ozi Hong Kong.
Anyị na-akpọ China ka ọ kwụsị imebi ikike nke ndị Hong Kong ịhọrọ ndị nnọchi anya ha na idebe Nkwupụta Nkwado na Iwu Ntọala. Maka nkwụsi ike na ọganihu nke Hong Kong, ọ dị mkpa na China na ndị ọchịchị Hong Kong na-asọpụrụ ọwa maka ndị Hong Kong iji gosipụta nchegbu na echiche ha ziri ezi.
Dịka onye ndu nke mba ụwa, anyị na-atụ anya na China ga-ebi ndụ kwekọrọ na nkwa mba ụwa na ọrụ ya na ndị Hong Kong. Anyị na-arịọ ndị isi gọọmentị etiti China ka ha tụleghachi omume ha megide ndị omeiwu hoputara na Hong Kong wee weghachite ndị otu nzụkọ omebe iwu ozugbo.